Uchaphe abasekhweni ngenhlamba | Ilanga News
Home Izindaba Uchaphe abasekhweni ngenhlamba
Uchaphe abasekhweni ngenhlamba
Baduduzekile ngesigwebo sodilikajele abane asitholile
UCHAPHE ngenhlamba abasekhweni lakhe ese-yongena emgodini, kwasu-ka umsindo phakathi eNkantolo eNkulu yaseMgungu-ndlovu izolo ngoLwesithathu, emuva kokugixabezwa ngodilikajele abane ngokuklinya abulale izingane zakhe ezintathu neyodwa yomkakhe owesilisa waseWyebank, ePinetown.
USbusiso Mpungose (44) (osesi-thombeni) ubebhekene namacala awenze ngoMandulo (September), okubulala uSiphesihle Mpungose (11), uKuhlekonke Mpungose (6), uKhwezi Mpungose (4) no-Ayakha Jiyane (17).
UMpungose ungene enkantolo eswenkile, egqoke ihembe eli-mnyama, udangara omnyama namateku, kungafani neminye imihla njengoba ebejwayele ukuvela enkantolo egqoke izimpahla ezile-ngayo, obekusuke kubukeka senga-thi uzibolekiwe.
Ngesikhathi ehleli ebhentshini lofakazi, ubebonakala engenakho ukuzisola ngesenzo sakhe, ebukeka sengathi akazi nokuthi lidumephi ijaji lifunda isitatimende sakhe, njengoba ebelokhu evusa ikhanda qede aligebise isikhathi eside.
IJaji Sharmaine Balton ngesi-khathi lethula isigwebo, lithe udinga ukususwa emphakathini isikhathi eside ngenxa yokuthi ukhombise ukungabi nandaba nempilo yomuntu, eklinya ebulala izingane ezizalwa nguyena.
Ngesikhathi ijaji lifunda isitatimende esibhalwe nguMpungose lapho ezivumela yena amacala akhe, echaza nokuthi wazibulala kanjani izingane zakhe – kuvele ukuthi imbangela yokubulala kwakhe izingane wukuthi ubenezi-nsolo eziqinile zokuthi inkosikazi yakhe, uNkk Xoli Mpungose, isibuyelene noyise ka-Ayakha, uMnu Vusi Jiyane.
Uthi ngemuva kokuba nalezi zinsolo, umhlalise phansi umka-khe wambuza ngazo kodwa waphika. Kugcine ngokuthi inkosikazi imtshele ukuthi seyikhathele wu-budlelwano babo, yathi mabahlukanise.
Uthi ngemuva kokuthola incwadi yesehlukaniso, uzibone ephele-lwa wumhlaba, wabona udokotela womndeni efuna amdlulisele ko-dokotela bengqondo ngoba ubezizwa ukuthi isimo akusona sinzima,
Ngebhadi uthi wafika udokotela eseholidini, wabe esenquma ukubulala izingane zakhe.
Eseqedile ukuzibulala, uthi wankunka utshwala ngoba ethi wenzela ukuthi uma esedakwe ngokwanele, athole isibindi soku-ziphosa ebhulohweni azibulale naye, kodwa wagcina engakwenza-nga lokho waze waboshwa.
UNkk Mpungose akazange alu-bhade enkantolo ukuyolalela isi-gwebo sikaMpungose ngenxa yokuthi kuthiwe isimo sakhe asikakalungi, kusenzima empilweni yakhe, njengoba abantu obekungamathemba akhe, ephilela bona, kabasekho emhlabeni.
ILANGA likhuluma nonina omdala wezingane, uNkz Mthobisi Mlaba, uthe bewumndeni basamu-kele isigwebo esitholwe nguSibusiso futhi yisona umndeni obuvele usilindele.
“Khona siyasamukela yize lokho kungeke kusazibuyisa izingane zikadadewethu. Kumanje kusenzima ukwamukelwa konke okwenzekile, kunzima nokuba abuyele emsebenzini ngenxa yesimo ase-kusona namanje,” kusho uNkz Mlaba.
Umphenyi wecala, uConst Lei Mchunu, wasePinetown, naye usijabulele lesi sigwebo.
Previous articleKuzoqiniswa isitilobho kumaCrown
Next articleBadliwe bagxeka iChiefs ngembazo